Home Wararka Kenya oo tababaraysa shaqaalaha Dowlada FS & Bangiga Aduunka oo maalgalinaya
Kenya oo tababaraysa shaqaalaha Dowlada FS & Bangiga Aduunka oo maalgalinaya
Waxaa asbuucyada soo socda ka bilaabanaya machadka weyna ee tababarka Shaqaalaha ee dowlada Kenya. Tababarkaan xoogan ayaa la siin doonaa shaqaalaha rayidka ee dowlada Federaalka Soomaaliya, waxa bixin doona tababarkaas qubaro iyo macaliin Keenyaan ah.
Bangiga Aduunka ayaa bixinaya maalgalinta tababarkaas, iyada oo shaqaalaha dowlada federaalka ay soo diri doonto wasaarada shaqada ee dowlada Federaalka. Lama ogo lacagta ku baxaysa tababarkaas balse waxaa lagu sheegay malaayiin doolar.
Shaqalahaan ayaa waxaa la dajin doonaa hoteelo ku yaalo duleedka magalaada Nairobi halkaas oo ay degaanan doonaan inta uu socdo tababarkaas.
Wasaarada shaqada ayaana ka codsatay in tababarkaas qandaraas lagu siiyo dowlada Kenya. Waxaa wax lala yaabo ah in Farmaajo idaacadaha ka caayo dowlada Kenya iyo hogaankeeda isaga oo dhanka ka tuugaya in shaqalihiiisa ay tababarto dowlada Kenya?. 8 Sideed kamida shaqaalaha la tababarayo waxa ay ka soo jeedaan xafiiska Rooble iyo kan Farmaajo.